फराकिलो मैदान भए कति रमाउँदा हुन्, यी भविष्यका पारस, सन्दीप ! » Onlycricnepal
फराकिलो मैदान भए कति रमाउँदा हुन्, यी भविष्यका पारस, सन्दीप !
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १९:२८
अछाम: जिल्लाको मंगलसेन नगरपालिका–४ मा पर्छ नागातोला। त्यसैको अलि परपट्टि पर्छ सान्टुडाको गाईबस्तु चराउने चौर जुन चौरमा दैनिक जसो बिहान बेलुकीको समुहमा भेटिन्छन्। बालबालिका तथा किशोर उमेरमा अघि बढदै गरेका १२-१३ जनाको समूहमा।
कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण निशेधाज्ञा हुँदा अधिकांश विद्यालय उमेरका बालबालिका स्कुल बन्द हुँदा गाउँघरमै छन्।
विद्यालय बन्द अवस्थामा घरमा रहेका नागातोलाका बालबालिका बाँझो भिरालो भीड चस्तै चौरमा क्रिकेट खेल्न ब्यस्त देखिन्छन्। प्रत्येक आली ५ मिटर चौडाई तथा २५ मिटर जति लम्बाई भएका ३ वटा आली सान्टुडा चौर बाँझो अवस्थामा छन्।
त्यहीँ बाजोलाई सदुपयोग गरी क्रिकेट खेल्न ब्यस्त छन्, नागातोलाका बालबालिका। चौरको तल्लो र माथिल्लो पट्टि पूरै खेतीयोग्य जग्गा भएकाले खेती लगाएको ठाउँमा बल पर्‍यो भने ब्याट्सम्यान ‘आउट’ हुने नियम नै उनीहरू बताउँछन्।
बर्खाको समय भएकाले चौर हरभरा देखिन्छ, चौरको बीचमा ढुङ्गाले चिनेरसमेत उनीहरुले क्रिकेट पिच बनाएर खेलिरहेका भेटिन्छन्।
साँफेबगर, कैलाशखोला, मंगलसेन कैलाशखण्ड सिर्जना चोक माथिपट्टि हुने क्रिकेट खेलतिर कसैको ध्यान गएको थिएन। गत शनिबार स्थानीय शिक्षक धनकुमार केसी घरमा हुँदा नजिकै ती बालबालिका खलिरहेको स्थान पुगेका थिए।
जुन तस्वीर सबैभन्दा पहिले आइतबार बेलुकी मात्रै फेसबुकमा पोष्ट गरेपछि मेरो ध्यान फोटोले निकै केन्द्रित गरेको थियो। सानोमा छँदा मोजाको बल काठको ब्याड बनाएर खेलेको याद फोटोले दिलाएको थियो।
धन सरको अनुमतिमा मैले सामाजिक संजालमा शेयरसहित क्रिकेटसँग सम्बन्धित पेज, खेलाडी, खेलप्रेमिलाई समेत शेयर गरेको थियो। ती तस्वीरहरू अहिले सामाजिक संजालमा भाइरलसमेत बनिरहेका छन्।
म स्वयम स्थलमा नपुगेपनि शिक्षक केसीकाअनुसार बालकहरू पुराना कपडालाई मोजाभित्र थुपारेर बल बनाएर स्थानीय काठबाटै ब्याट समेत बनाइ खेल्न खोज्दैछन्। जुन खेल्ने चाहना र इच्छा सबैको हुन्छ, त्यसमाथि पनि बालापनमा खेल खेल्ने चाहना अझै बढी हुन्छ, पिचको बीचमा उखेल्नै नसकिने ठूलो ढुङ्गाको प्रवाह नगरी फिल्डिङ गर्दाको सुरक्षा र जोखिम त अझै बढी देखिएको छ।
अगाडि केसीले भने सुरुमै देखेर निकै भावुक बने अलिकती फराकिलो जग्गा भए कति रमाउँदा हुन्? राम्रो मैदानमा होस्? टेनिस बल होस्? फेसनसहित सहरिया ब्याड होस्?
कहिले मैदानमा खेल्न पाउने हुन चाँडै उनीहरूले मैदानमा खेल्न पाएको भए, कति खुसी हुने थिए। अछाममा स्तरीय रूपमा क्रिकेट खेल्नका लागि खेल मैदान नै छैन।
क्षेत्र नम्बर १ को साँफेबगरको रिडिकोट, बान्नीगढीजयगढ गाउँपालिकाको थालाकोट खेलमैदन भएतापनि अझै सुविधा सम्पन्नसहित खेल्न योग्य छैन। अछाम क्षेत्र नम्बर २ मा भने अझै पनि सामान्य खेल मैदानसमेत छैन।
गाउँ–गाउँमा आएका सिंह दरबार स्थानीय सरकारले खेलाडीको लगानी मेहनतलाई समेत मध्येनजर गर्दै उचित भौतिक संरचना निर्माण गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ। पर्याप्त भौतिक संरचना भए यी मोजाको बल खेल्ने बालकहरू भविष्यमा पारस खड्का र सन्दीप लामिछाने जस्ता क्रिकेटर बन्न सक्नेमा कुनै शंका छैन।
सन्दीपले सुधारे टी–२० वरियता, यस्तो छ उनको स्थान
क्यानद्वारा मुख्य प्रशिक्षकसहित विभिन्न पदमा आवदेन आह्वान
१८ भाद्र २०७७, बिहीबार १०:१३
२० बैशाख २०७८, सोमबार १३:१६
वेष्ट इन्डिज टिमलाई सन्दीपले दिए बधाई
२९ असार २०७७, सोमबार ०७:०८